Daawo Nin calooshiisa kusoo qaaday cinjir daroogo ka buuxda oo ay qabteyn ciidamadda amaanka!! « AYAAMO TV
Arimaha bulshada, XOGSID IYO MAANTA
Daawo Nin calooshiisa kusoo qaaday cinjir daroogo ka buuxda oo ay qabteyn ciidamadda amaanka!!
1048 Views Date February 15th, 2014 time 9:32 am
Garoomadda caalamiga ee dalka maraykanka ayaa waxaa inta badan isaga goosha malaayiin dad ah kuwaasi oo intooda badan isku daya in ay dalkaasi geliyaan waxyaabaha ka mamnuuca ahdalkaasi sida daroogadda iyo ka ganacsiga hargaha xoolaha iyo wixii lamidka ah.
Dhawaantaan ayeey aheyd markii garoonka caalamiga ah John F Kennedy lagu qabtay nin doonayay in uu dalkaasi geliyo daroogadda loo yaqaan Cocaine, iyadoo ninkaasi oo ku siday daroogadda calooshiisa isla markaana kusoo cabeeyay cinjirka loo isticmaalo galmadda (Condom) taasi oo fajac ku noqotay askartii qabatay ninkaasi.
Ciidamadda amaanka ee garoonka F. Kennedy ayaa waxaa ay qabteeyn labo nin oo ay ugu shakiyeen in ay caloosha ku sidaan nuucyadda kala duwan ee daroogadda, waxaase markii danbe baaritaan dheer kadib ay ciidamadda amniga ay ogaadeyn mid kamid ahaa raggii la qabtay in uusan waxba ku sidan caloosha, laakiin midkii kale la ogaaday in uu ku sido calooshiisa daroogo tankeeda uu aad u weyn yahay.
Mid kamid ah ciidamadda amniga ee ninkaasi qabtay ayaa waxaa uu ka yaabay sida uu ninkaasi calooshiisa ugu aaminay halistaasi in taasi dhan oo laga yaabay in ay ku dhax dilaacdo calooshiisa, wuxuuna askagirigii madaxa luxuyay in muddo ah isaga oo la yaabnaa ninkaasi iyo wuxuu halis u geliyay naftiisa.
Ugu danbeyntii waxaa ay ciidmadda amniga ee garoonka F Kennedy ku guuleysteen in ay kasoo saaraan ninkii daroogadii ku dhaxjirtay cinjirkii(Condon) iyagoo durbadiiba ku dhaqaaqay in ay hubiyaan nuuca ay tahay daroogadda uu ninkaasi caloosha ku siday waxaase ay durbadiiba garteyn in ay tahay